Carlos Oo Ka Tagista Neymar Ee Barca Ku Eedeeyay Messi [Sabab] %
Halyeeygii hore ee kooxda kubada cagta Real Madrid ee Roberto Carlos oo wareysi siiyay Majalada France Football, ee wadanka Faransiiska ayaa wuxuu ku nuux-nuux saday in kasoo tagitaanka Neymar Jr ee Barcelona uu sabab u ahaa Lionel Messi.
Neymar ayaa wuxuu kasoo dhaqaajiyay Bluagrana sanad ciyaareedkii lasoo dhaafay, isagoona ku biiray PSG, markaasoo lagu soo iibsaday aduun lacageed dhan 222 Milyan, taasoo ka dhigtay ciyaaryahankii ugu qaalisanaa taariikhda kubada cagta.
Xidigaan reer Brazil ayaa wuxuu hada garoomada uga maqnaan doonaa inta ka dhiman xili ciyaareedkan dhaawac dhanka Qancowga ah, isagoona shaki weyn laga gelinayo inuu taam noqdo koobka aduunka 2018, kaasoo Ruushka lagu qaban doono.
“Waxaa rumeysanahay in Neymar markii uu usoo wareegay PSG, oo uu kasoo tegay Barcelona uu sameeyay ficil wanaagsan,” ayuu Carlos yiri.
“Wuxuu uga soo tegay Barca si uu unnoqdo ciyaaryahanka aduunka ugu fiican, wuxuuna uga soo tegay Barce, maxaa yeelay Messi,” ayuu sii daba dhigay.
“Maxaa yeelay wuxuu miyirka ku ahaa in Mess iyo Cristiano ay yihiin kuwa kaalmaha koowaad iyo labaad ku kala jira, wuxuuna rabay inuu soo fariisto ugu yaraan kaalinta saddexaad,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Roberto Carlos.